मूल्यवृद्धि फिर्ता नलिने सरकारको संकेत, प्रधानमन्त्री भन्छन्- ग्याँस किन चाहियो ? हामीसँग विद्युत नै फालाफाल छ ! - Abhiyan news
मूल्यवृद्धि फिर्ता नलिने सरकारको संकेत, प्रधानमन्त्री भन्छन्- ग्याँस किन चाहियो ? हामीसँग विद्युत नै फालाफाल छ !
३० कार्तिक २०७८, मंगलवार ०९:५१ news DMLeaveaComment on मूल्यवृद्धि फिर्ता नलिने सरकारको संकेत, प्रधानमन्त्री भन्छन्- ग्याँस किन चाहियो ? हामीसँग विद्युत नै फालाफाल छ !
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विद्युतीय चुल्हो र विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि सरकारले प्रोत्साहन गर्ने बताएका छन्।
मंगलबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (ईपान)को १९ र २० औँ साधारणसभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले विद्युतीय चुल्हो र विद्युतीय बस सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए।
उनले विद्युतीय चुल्हो र बस सञ्चालनका लागि उद्यमी, व्यवसायीहरुलाई सरकार प्रोत्साहन गर्न तयार रहेको बताए। प्रधानमन्त्री देउवाले देशभर विद्युतीय सामग्रीहरुको प्रयोगगरी देशलाई नमुना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले ऊर्जा उत्पादकहरुले खल्तीमा लाइसेन्स लिएर काम नगर्ने गरेको भन्दै काम गर्न पनि आग्रह गरे।
उनले भने, ‘हामीले किन यो ग्यासको चुल्हो बाल्ने? हामीसँग यति विद्युत छ कि हामी व्याट्रीबाट गाडी चलाउन सक्छौँ। बस चलाउन सक्दछौँ। हाम्रो चुल्हो पनि इलेक्ट्रिक चुल्हो हुन सक्दछ। हामी नेपालभरी नै विस्तार–विस्तार यता जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्ता जो उद्यमी हुनुहुन्छ, व्यापारी हुनुहुन्छ त्यस्तालाई इन्सेन्टिभ दिन तयार छौँ। काठमाडौँमा कमसेकम व्याट्रीबाट गाडीहरु सञ्चालन गरौँ।’
उनले थपे, ‘घरमा खाना पकाउने इलेक्ट्रिक चुल्हो बनाउँ। भोलि तराई, मधेश सबै ठाउँमा इलेक्ट्रिक बस चलाउन सक्यौँ भने नेपाल नमुना बन्न सक्दछ। उद्योगपतिहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरु सुरु गर्नुस्। सरकारले इन्सेन्टिभ दिन्छ।’
कार्यक्रममा बोल्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री पम्फा भुसालले निजी क्षेत्रको माग बमोजिम निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत व्यापारको अनुमति दिन सरकार तयार रहेको बताइन्।
निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्नसक्ने विश्वासिलो आधारसहित आउनको निम्ति उनले आग्रह गरिन्।
मन्त्री भुसालले नेपालमा विद्युत उत्पादनको तुलनामा विद्युतको माग र खपत बढ्न नसकेको कारणले उत्पादित विद्युत खेर गइरहेको बताइन। विद्युत खेर जाँदा निजी क्षेत्र, लगानी गर्ने बैंक र राज्यले नै क्षति बेहोर्नुपरेको उनको भनाइ छ।
एकैवर्षमा ९ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको कफी निर्यात
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आन्दोलनमा उत्रिएका कानुन व्यवसायीहरू के भन्छन ?
१९ भाद्र २०७८, शनिबार ११:०७ अभियान न्यूज
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को केन्द्रीय कमिटी बैठक आजबाट सुरु हुँदै
२५ फाल्गुन २०७८, बुधबार ०२:४६ अभियान न्यूज
ताप्लेजुङको उडान अवरुद्ध
५ असार २०७९, आईतवार ०२:३० अभियान न्यूज